ကျနော် အဖြေရှာနေတာ | MoeMaKa Burmese News & Media
ကျနော် အဖြေရှာနေတာပါ …
ကျနော် အဖြေရှာနေတာ …
ကျနော့်ကို အမေမွေးတဲ့ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကစခဲ့ …
တရုတ် – ဗမာ အရေးအခင်း
ဆန် ရှားပါးမှု …
အာ … အဖြေရှာပါတယ်ဆိုမှ ပြဿနာပဲ
၁၉၇၄၊ ၇၅ … ပြဿနာတွေ
ဦးသန့် … ကျွန်းဆွယ် … သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း … ဂျွန် – ၆
ဘုန်းမော် … စိုးနိုင်
“ နောင်ကို ဆူဆူပူပူလုပ်ရင်
စစ်တပ်ဟာ မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး … ”
ဂျွန် – ၂၁
အာ … ကျနော် အဖြေရှာနေတာပါဆို
“သမဂ္ဂ အဆောက်အဦကြီးကို ပျော်ပျော်ပါးပါး အုတ်မြစ်ချ …”
အဖြေမတွေ့ဘဲ … ပြဿနာတွေချည်း တွေ့
ဒီပဲယင်း … လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ပွဲ
စု – လွှတ် – တွေ့
၂၀၀၇ – စက်တာဘာ … သံဃာထု
၂၀၁၀ – အဓမ္မရွေးကောက်ပွဲ
ဂုရုရေ … မင်းပြောသလို
ပြဿနာတွေ တပြုံ တထွေးကြီး …။
“၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို မစွန့်လွှတ်ဘူး
ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မကျတော့ဘူး ”
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ် … ၀င်တယ် …”
အဲဒါ …. မင်း သိလိုက် … ကြားလိုက်သလားဟ …။
ဘုရား … တရား … သံဃာ
ဘုန်းကြီးကို မီးလောင်ဗုံးနဲ့ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းရတယ်လို့ …
သမတကြီး … သမတကြီး
အဲလေ … ကျနော် အဖြေရှာနေတာပါ …
အဟင့် … ဟင့်
“သမတ ဖြစ်ချင်တယ် … သမတ လုပ်ချင်တယ် ”
“ဖန်လ်ခွက်ထဲ ရေတ၀က်ရှိနေရင် ရှိတယ်လို့ လက်ခံရမှာပဲ ”
ဟာ … ဟဲ့ကောင် ငတုံးရ
အဲဒါ …. ရေမဟုတ်ဘူးဟ
သင်္ချိုင်းကုန်းက အမေရေ …
ထပြီး … ဆုံးမလိုက်ပါတော့ဗျာ …။ ။
+ ၀န်ခံချက်။ ။ ဒီစာ ကဗျာလို့ မခံစားကြပါနဲ့ ဗျာ …